Kiswahili ny don-tany sy ny kapo-tandroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2019 3:38 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny janoary 2006)
Tsy resy lahatra i Mwandani raha tokony ho faly na tezitra rehefa avy namaky ny tamberina nataon'ny filoha teo aloha tany Tanzania, Benjamin Mkapa, fehim-potoam-piasana dimy taona anankiroa. Nahavita ny fehim-potoana fiasana fanindroany i Mkapa tamin'ny faran'ny taona lasa teo. Jakaya Kikwete, ny mpandimby azy, minisitry ny Raharaham-bahinin'ny governemanta Mkapa. Filoha Tanzaniana fahatelo hatrizay nahazoana ny fahaleovan-tena i Kikwete.I Mwalimu Nyerere no voalohany, nanaraka azy i Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, ary i Jakaya Kikwete amin'izao.
Mahatsiaro ny revolisionan'i Zanzibar izay nanongana ny Soltanin'i Oman, ny Tanzaniana isaky ny volana janoary. Nandinika ny tantara lavan'ny herisetra tao amin'ny nosy mizaka tena ampahany i Mwandani tamin'ity taona ity. Nandritra ny kabary fanokafana, nampanatena ny filoha tanzaniana fa hikarakara ny fihenjanana ara-politika any Zanzibar.
Nasehon'i Michuzi ny sary efa tonta nahitana ny filoha tanzaniana voalohany nifangaro tamin'ny tanin'ny Zanzibar sy Tanganyika mba ho mariky ny firaisaina teo amin'ireo firenena roa tonta ireo tamin'ny taona 1964.
Nanoratan'i Gaphiz fohy dia fohy ny tranonkala iray manana anaran-tsehatra tanzaniana, izay ahafahan'ny olona hibilaogy maimaim-poana.
Ho valin'ny fitomboan'ny fahalianana amin'ny famahanam-bilaogy tany Tanzania, nanoratra bilaogy vaovao misy torolalana amin'ny teny swahili i Jikomboe. Miaty ny voatra manaraka andro amin'ny torolàlana nampiasaina tao amin'ny tontolon'ny bilaogy kiswahili nandritra ny roa taona ny bilaogy.
Noho ny antony maro, na poeta na tia poezia ny ankamaroan'ny bilaogera kiswahili. Saika tsy azo tanterahana avokoa ny mandika ny ankamaroan'ireo tononkalo ireo ary mampita hafatra mitovy. Matetika ireo bilaogera poeta ireo mifampihaika amin'ny fampiasana swahili sarotra sy lalina, izay efa fomban-drazana tafaorina tsara amin'ny poezia swahili. Ireo poeta bilaogera malaza indrindra dia ry Mkwinda, Mwandani, Kasri la Mwanazuo ary Nyembo.
Manana fiakanjo nasionaly ihany ny Tanzaniana ny farany.